आँचल शर्मा र पल साह को ब्रेकप भएको हो त.? हेर्नुहोस भिडियो – Hamrosandesh.com
आँचल शर्मा र पल साह को ब्रेकप भएको हो त.? हेर्नुहोस भिडियो
आँचल शर्मा र पल साह को ब्रेकप भएको हो त.? हेर्नुहोस भिडियो : नेपालि चलचित्र क्षेत्र का नायक पल साह र अभिनेत्री आँचल शर्मा को प्रेम बारे एकदमै हल्ला चलेको थियो नेपालि चलचित्र नाइँ नभन्नु ल ४ मा एकै साथ् काम गरिसकेपछि पल र आचल को जोडी दर्शक हरुलाई एकदमै मन पर्यो र यो जोडीको चर्चा सुरु भयो तर त्यो चर्चाले चलचित्र र दुवै लाई एकदमै फाइदा पुग्यो ! दर्शक हरुले यो जोडीलाई आप जोडी नै राखिदिएका छन ! तर अहिले सामाजिक संजाल तथा मिडिया हरुमा पल र आंचल टाढा भएको खबरहरु आइरहेको छ ! पल र आचल संगै चलचित्र मा काम नगर्नाले पनि यो कुरालाई अझै थप मसला जस्तै भएको छ !
तर, अनलाइनखबरसँग ‘लभ टक’मा रहेर कुराकानी गर्दै नायिका आँचल शर्माले आफूहरुले कहिले पनि प्रेम भएको पनि स्विकार नगरेको र ब्रेकअपको बिषयमा पनि केही नबोलेको बताएकी छिन् । आँचलले भनिन्–‘हाम्रो सम्बन्ध प्रेम र ब्रेकअप भनदा धेरै माथि छ । यो विश्वासिलो छ र शुद्ध पनि छ । कोही आएपनि हाम्रो जोडीमा कुनै आँच पुर्याउन सक्दैन ।’आँचलले अगाडि भनिन्–‘हामी फरक–फरक चलचित्रमा काम गरिरहेका छौ । यसको मत्तलब यो होइन कि, हामी टाढा छौ । हामी त कहिले एक अर्कासँग चलचित्र खेल्न पाउँछौ भनेर बसिरहेका छौ । तर, टिम र समय नमिलेको कारणले यो संभव भैरहेको छैन ।’
आँचलले पल र आफ्नो बिहे हुँदैन भनेर पनि आफूले ठोकुवा गर्न नसक्ने बताइन् । तर, बिहे नै हुन्छ भनेर पनि भन्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले आफुहरु यस्ता कुराले आकर्षित नभएको पनि खुलाइन् । आँचलले अगाडि भनिन्–‘आँप’ जोडी दर्शकले हाम्रो कामलाई मन पराएर राखिदिनुभएको हो । जे सुकै होस्, तर यो जोडी रहन्छ ।’ आँचलले आफूहरु प्रेममा नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।वैशाख २० गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’को प्रमोशनमा कुदिरहेकी आँचल यो चलचित्रबाट पनि आफू निकै नै आशावादी रहेको बताउँछिन् । यो चलचित्रमा उनले नायक पुष्प खड्काको जोडीको रुपमा काम गरेकी छिन् । हेर्नुहोस भिडियो !